Saldhiga Milatari ee Turkigu Ka Hirgaliyey Muqdisho iyo Walaaca Somaliland…W/Q:-Mr. Nasir Hassan Timoweyne | Hangool News
Saldhiga Milatari ee Turkigu Ka Hirgaliyey Muqdisho iyo Walaaca Somaliland…W/Q:-Mr. Nasir Hassan Timoweyne
Saldhiga milatari ee turkigu ka sameyey magaalada Muqdisho ee caasimada Somalia, dadka reer Somaliland waxay ka kala qabaan figrado kala duwan. Dadka qaar waxay ka qabaan fikir walaac badan leh, waxa ka mida Madaxweyne xigeenkii hore ee Somaliland mudane Ahmed Yusuf Yaasiin oo maqaal uu ku soo qoray wargeyska caanka ee Geeska ku sheegay in ay arintaasi khatar ku tahay amniga qaranka JSl. Qaar kale waxay la yaaban yihiin dadkaas ka walaacasan, oo waxay aaminsan yihiin in ay muhiim tahay in ay Somaliya lugaheeda isku taagto si aynu ugala hadalno qadiyada Somaliland. Kuwo kale fikir
ba kama haystaan waxayna ku yara wareersan yihiin bal sidii ay wax uga ogaan lahaayeen. Maqaalkeenan maanta waxaan si kooban uga jawaabi doonaa dhawr su’aaloood oo muhiim ah: Saldhigan milatari ee Turkigu waa mid noocee ah? Waa maxay u jeedada uu Turkigu uga dhisay halkaas? Iyo saameyn cankee ah ayuu ku leeyahay gobolka, faa’iido iyo khasaare?
Ugu horeyn, sida lagu lagu daabacay jariidada TRT World, saldhiganni maaha saldhig ciidan oo caadi ah, ee waa dugsi loogu talo galay in uu Turkigu ku tababaro ciidamada Somaliya sida uu sheegay safiirka Turkiga u fadhiya Somaliya, mudane Oglan Beker.[i]Dhismahan oo bilaabmay bishii March 2015, xadhigana laga jaray 30 Sep 2017, waxa uu ka kooban yahay 3 dugsi, qollalkii jiifka iyo bakhaaro. Waxa uu ku fadhiyaa dhul dhan 4km2. Waxa ku baxay kharash dhan US $ 50 million. Dawlada Turkigu waxay ugu talo gashay inay ku tababarto 10,000 oo askari oo ciidamada qaranka Somaliya ah. Waxana halkaa jooga 200 oo askari oo Turki ah oo tababarayaal ah, waxaana halkaa lagu tababari karaa 1500 oo askari halkii mar[ii].
Ujeedooyinka uu Turkigu ka leeyahay saldhiganni waxa ugu weyn laba arimood oo kala ah, inuu rabo inuu saameyn ku yeesho gobolka iyo Afrikaba (geopolitcs) iyo mid dhaqaale sida lagu qoray jariidadda Arabnews[iii]. Hadafka 1aad (goal) ee Turkigu uu ka leeyahay saldhiganni waa sidii uu waddan kani u xasili lahaa loogana xoreyn lahaa kooxaha argagixisada ah sida Alshabaab si uu uga gaadho danaha gaarka ah ee uu ka leeyahay, danahaas oo ah kuwa aan kor kusoo sheegnay (Geopolitics and economic presence). Tusaale ahaan, dhinaca dhaqaalaha marka aad eego, Turkigu alaabada ganacsi ee uu u dhoofiyey wadanka Somalia 2010 kii waxa lagu qiyaasay US $ 5.1 million halka sanadka 2016 kiina ay gaadhay US $ 123 million[iv].Waxa aad halkaa ka fahmi karnaa in danaha dhaqaale ee Turkigu ka leeyahay wadankaas ay sii kordheyso. Waxa iyadna xusid mudan in 2005 uu Turkigu bilaabay inuu xidhiidh dhaw la yeesho Afrika, iyada Erdogan na sheegay in ay qaaradaas daneynayaan maadaama ay leedahay sida uu sheegay kheyraad dabiici ah oo baaxad[v].
Xidhiidhka labada dal aad ayuu isku soo tarayey ilaa 2011 ka dib markii uu m.weynaha Turkigu Erdoganbooqasho ku tagay Somalia, isagoo noqday m.weynihii ugu horeyey ee aan Afrikan ahayn ee booqda waddan kaas in ka badan 20 sano. Sida lagu daabacay wakaaladda Wararka ee Reuters ee fadhigeedu yahay London 30 kii bishan, Turkigu waxa uu isku dayeyey kuna guulaystay inuu soo jiito quluubta dadka Somalida ah[vi]. Waxa uu kor u qaaday siyaasadiisa arrimaha dibadda ee ku wajahan Somalida in ka badan waddan kasta. Waxa uu kordhiyey gargaarkii (humanitarian aid). Tusaale ahaan, sida ay Retours qortay, 2012 waxa uu xataa gargaarkii aabarah uu mariyey hawada ilaa 60 tan oo gargaar bani-Adaanimo. Waxa uu u diray boqollaal dhakhtaro Turki ah si ay u daweeyaan dadkii abaarahaas wax ku noqday iyo si ay u tabaraan shaqaale cusub iyo shaqaalaha caafimaadka[vii].
Turkigu waa waddanka kaliya ee muujiyey 100% daacidnimada dib u dhiska wadankaas. Markii la weydiiyey Oglan Beker sababta ay turkigu Somaliya uga doorteen Afrikana waxa uu sheegay in sababtu ay tahay in waddan kani uu noqday mid uu iska ilaaway caalamku. Waxa uu gacan weyn ka geystay xoojinta hay’addaha dawliga ah, dhismaha wadooyinka iyo gagooyinka diyaaradaha (infrastructure), waxbarashada iyo caafimaadka[viii].
Hadii aynu u soo noqono saldhiga ciidan iyo sida uu saameyn ugu leeyahay gobolka, waa arrin aanay waddammada gobolku ku faraxsaneyn marka loo eego dhinaca amniga. Itobiya iyo Kenya marnaba raali kama ahayn kamana aha in Somaliya ay yeelato ciidan tayo iyo tiroba leh maadaama ay Somaliya wali ka hadhin hamigii Somali-weyn. Hasa ahaatee wadanka ay halista ugu weyn ku noqoneysaa waa Somaliland oo ilaa hada aan beesha caalamku u aqoonsanin waddan ka madax-bannaan Somaliya. Sidaa darteed, maadaama dhulka Somaliland loo aqoonsan yahay inuu yahay qayb ka mid ah Somaliya, waxa aan beesha caalamku u arkeynin sharci daro in Somaliya ay dagaal ku soo qaado Somaliland si ay u qabsato. Somaliland na waxay ku badbaadi kartaa 2 midkood: in ay aqoonsi hesho, kaasna 27 sano ayaa la baadi goobayey walina lama hayo, iyo ta labaad oo ah cudud ciidan.
Guntii iyo gabagabadii, saldhigan ciidan ee Turkigu Muqdisho ka furay maaha mid caadi ah oo la mid ah midka uu Qadar ku leeyahay sida uu sheegay ambasadoor Oglan ee waa dugsi tabarka ciidanka. Ujeedada uu Turkigu halkaa uga sameeyeyna waa inuu waddankaas ka dhigo mid xasiloon si looga adkaado kooxaha argagixisada ah si uu danaha uu ka leeyahay oo ah mid strategy yadeed u gaadho waxana ka mid ah arimo dhaqaale iyo saameynta awoodeed ee rabo inuu ku yeesho qaarada. Dhinaca amniga, waa mid kor u sii qaadaysa xiisada gobolka, hasa ahaatee khatartiisi ku kooban tahay Somaliland. Hadaba su’aashu waxay tahay Somaliland ma iska cabin kartaa, sidey se iskaga caabin kartaa faragalinta aad ka u suurtogal ka ah ee Somaliya ku sameyn doonto? Waxaynu kaga jawaabi doonaa maqaalkeena labaad.
[i](TRT WORLD: http://www. trtworld.com/mea/why-is-turkey-launching-a-new-military-training-camp-in-somalia)
[v]weyn (TRT WORLD:http://www. trtworld.com/mea/why-is-turkey-launching-a-new-military-training-camp-in-somalia)
[vii]dalkaas (TRT WORLD: http :// www.trtworld.com/mea/why-is-turkey-launching-a-new-military-training-camp-in-somalia-326407)
Qorraaga:-Mr. Nasir Hassan Timoweyne
2th Oct. 2017,